New London ndege kubva kuNew York, Denver, San Francisco neBoston paUnited Airlines
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » New London ndege kubva kuNew York, Denver, San Francisco neBoston paUnited Airlines
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau
New London ndege kubva kuNew York, Denver, San Francisco neBoston paUnited Airlines.
London ndiyo yaive yakanyanya kurongeka kune dzimwe nyika kune vatengi vebhizinesi reUnited muna Gumiguru, uye iyo ndege inotarisira kuti maitiro aya achaenderera mberi muna 2022.
United Airlines inozivisa ndege shanu nyowani kubva kumaguta mana eUS kuenda kuLondon Heathrow Airport.
United Airlines yekupa makumi maviri nemaviri ndege pazuva kuenda kuLondon, United Kingdom neChirimo che22.
Kana sevhisi yatanga, United ichapa ndege dzakawanda pakati peNew York City neLondon kupfuura chero imwe mutakuri weUS.
United Airlines nhasi yazivisa kuti iri kuwedzera ndege shanu nyowani kuLondon Heathrow Airport, kusanganisira dzimwe ndege mbiri kubva kuNew York/Newark, dzimwe nzendo kubva kuDenver neSan Francisco, pamwe nendege itsva yakananga kubva kuBoston. Iyi sevhisi nyowani inotanga muna Kurume 2022 uye nekuwedzera uku, United ndiyo chete inotakura US kupa basa risingamire pakati pemisika minomwe yepamusoro yemabhizinesi neLondon. United ichapa ndege makumi maviri nembiri pazuva kubva kuUS kuenda kuLondon, uye nendege dzakawanda pakati peNew York City neLondon kupfuura chero imwe mutakuri weUS. London ndiyo yaive yakanyanya kurongeka kune dzimwe nyika kune vatengi vebhizinesi reUnited muna Gumiguru, uye iyo ndege inotarisira kuti maitiro aya achaenderera mberi muna 22.
"Kwemakore anoda kusvika makumi matatu, United yakapa hukama hwakakosha pakati peUS neLondon, kuchengetedza basa panguva yese yedenda uye nekukura zvine hungwaru hurongwa hwedu kuti vatengi vedu varambe vari munzvimbo idzi dzakakosha dzebhizinesi dzakabatana," akadaro Patrick Quayle, mutevedzeri wemutungamiri wenyika. network uye mibatanidzwa pa United Airlines. "London chikamu chakakosha chetiweki yeUnited uye isu tinoramba tine chivimbo chekuti kudiwa kucharamba kuchikura, kunyanya sezvo nzendo dzekunze dzebhizinesi dzichidzoka muna 2022."
Ndege itsva idzi dzinovaka pane huru yeUnited-ever trans-Atlantic kuwedzera zvakaziviswa kutanga kwemwedzi uno. United parizvino inoshanda nendege nomwe kuenda Heathrow kubva kuUS: ndege mbiri dzezuva nezuva kubva kuNew York/Newark neWashington DC, uye nendege imwe yemazuva ese kubva kuChicago, Houston, neSan Francisco. Muna Zvita, sevhisi ichawedzera kusvika gumi zuva nezuva nendege, nendege dzekuwedzera kubva kuNew York/Newark neChicago, munguva yezororo rechando.
Idzo ndege shanu nyowani dzinoita kuti kusvetuka padziva kuve nyore uye kugadzikana kune vese vafambi uye bhizinesi vafambi, se United Airlines acha:
Tanga kutsva, ndege dzemazuva ese kubva kuBoston dzakashanda neUnited's premium Boeing 767300ER, iyo ine zvigaro makumi mana nematanhatu zveBusiness Polaris zvigaro uye makumi maviri nemaviri eUnited Premium Plus® zvigaro zvehupfumi.
Tangazve ndege dzezuva nezuva kubva kuDenver uye wedzera yechipiri zuva nezuva nendege inoshandiswa neBoeing 787-9.
Wedzera ndege dzechitanhatu nedzechinomwe zuva nezuva kubva kuNew York/Newark, imwe neimwe ichange ichishandiswa neUnited's premium Boeing 767-300ER uye bvumira kushanda kweawa imwe neimwe manheru.
Wedzera ndege yechitatu zuva nezuva kubva kuSan Francisco inoshandiswa neBoeing 787-9.
Tangazve sevhisi yemazuva ese kuenda kuLondon kubva kuLos Angeles.